ဇှနျလ (၃၀) ရကျအထိလြှောကျထားနိုငျမညျ့ သွစတွေးလပြညာသငျဆု | Edge.com.mm : Best Education Guide in Myanmar
ဇှနျလ (၃၀) ရကျအထိလြှောကျထားနိုငျမညျ့ သွစတွေးလပြညာသငျဆု
** Unicode **
ဩစတွေးလပြညာသငျဆု လြှောကျဖို့စိတျဝငျစားသူတှရှေိပါသလား။ ပညာသငျဆုလြှောကျလှာတှကေို ဇှနျလ (၃၀)ရကျနေ့ အထိ လြှောကျထားနိုငျပါတယျ။
ဩစတွေးလပြညာသငျဆု (မွနျမာ) အစီအစဉျကနေ အှနျလိုငျးကတဆငျ့ပညာသငျဆုဆှေးနှေးပှဲတှေ ကငျြးပဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။ ပညာသငျဆုအကွောငျးအသေးစိတျဟောပွောမှူနှငျ့အတူ မေးခှနျးတှကေိုဖွကွေားပေးမှာဖွဈပါတယျ။
ဩစတွေးလပြညာသငျဆု အှနျလိုငျးဟောပွောပှဲတှကေို ဖျောပွပါနရေ့ကျမြားအတိုငျးတကျရောကျနိုငျပါတယျ။
၁၅-၅-၂၀၂၀ (သောကွာနေ့)၊ နလေ့ညျ (ဂ၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
၁၇-၅-၂၀၂၀ (တနင်ျဂနှနေေ့)၊ နလေ့ညျ (၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
၂၂-၅-၂၀၂၀ (သောကွာနေ့)၊ နလေ့ညျ (၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
ပညာသငျဆုဟောပွောမှူတှကေို Zoom မှတဆငျ့ ပွုလုပျမှာပါ။ တကျရောကျဖို့ စိတျဝငျစားသူတှအေနနေဲ့ ဘယျနမှေ့ာ တကျရောကျမယျ ဆိုတာကို [email protected] သို့ အီးမေးလျပို့ပွီး စာရငျးသှငျးနိုငျပါတယျ။
မိမိ တကျရောကျမယျ့နမှေ့ာ ပါဝငျဆှေးနှေးဖို့ အသေးစိတျ အခကျြလကျတှကေိုပေးပို့ပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ဆှေးနှေးပှဲ တဈခြိနျကို လူဦးရေ (၃၀၀) အထိပဲ အမြားဆုံးလကျခံမှာဖွဈလို့ အရငျဆုံးစာရငျးသှငျးသူတှအေတှကျ ဦးစားပေးမှာဖွဈပါတယျ။
မကွာခငျ အှနျလိုငျးကနေ တှကွေ့ပါမယျ။
Interested in applying for Australia Awards Scholarships? Applications for Australia Awards Scholarships are open and will close 30 June 2020.
Australia Awards Myanmar will be organising Online Information Seminars to share information about the Scholarships and answer your questions.
Australia Awards Myanmar Online Information Seminars
Dates: i. Friday 15 May 2020, from 3:00 – 4:00 pm
ii. Sunday 17 May 2020, from 3:00 – 4:00 pm
iii. Friday 22 May 2020, from 3:00 – 4:00 pm
These information seminars will be delivered via Zoom. If you are interested to attend one of these sessions, please confirm which session you would like to attend on an email to - [email protected] . You will receive the meeting login details on the day of the information session. Please note one session can accommodateamaximum of 300 participants, so registration will be confirmed onafirst come first serve basis.
Australian Embassy in Myanmar
Australia Awards Myanmar Alumni - AAMA
Australian Alumni Myanmar
Credit: Australian Embassy in Myanmar
** Zawgyi **
ဩစတြေးလျပညာသင်ဆု လျှောက်ဖို့စိတ်ဝင်စားသူတွေရှိပါသလား။ ပညာသင်ဆုလျှောက်လွှာတွေကို ဇွန်လ (၃၀)ရက်နေ့ အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဩစတြေးလျပညာသင်ဆု (မြန်မာ) အစီအစဉ်ကနေ အွန်လိုင်းကတဆင့်ပညာသင်ဆုဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။ ပညာသင်ဆုအကြောင်းအသေးစိတ်ဟောပြောမှူနှင့်အတူ မေးခွန်းတွေကိုဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဩစတြေးလျပညာသင်ဆု အွန်လိုင်းဟောပြောပွဲတွေကို ဖော်ပြပါနေ့ရက်များအတိုင်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၁၅-၅-၂၀၂၀ (သောကြာနေ့)၊ နေ့လည် (ဂ၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
၁၇-၅-၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ့)၊ နေ့လည် (၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
၂၂-၅-၂၀၂၀ (သောကြာနေ့)၊ နေ့လည် (၃:၀၀ - ၄:၀၀ နာရီ)
ပညာသင်ဆုဟောပြောမှူတွေကို Zoom မှတဆင့် ပြုလုပ်မှာပါ။ တက်ရောက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့ ဘယ်နေ့မှာ တက်ရောက်မယ် ဆိုတာကို [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပို့ပြီး စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။
မိမိ တက်ရောက်မယ့်နေ့မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ အသေးစိတ် အချက်လက်တွေကိုပေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆွေးနွေးပွဲ တစ်ချိန်ကို လူဦးရေ (၃၀၀) အထိပဲ အများဆုံးလက်ခံမှာဖြစ်လို့ အရင်ဆုံးစာရင်းသွင်းသူတွေအတွက် ဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာခင် အွန်လိုင်းကနေ တွေ့ကြပါမယ်။
Latest Post International Local Read 959 times